Sheeko Xiiso Badan Oo Dhax Martay Wiil Nargis Fakhri Ku Qalday Katrina Kaif - Hablaha Media Network
Sheeko Xiiso Badan Oo Dhax Martay Wiil Nargis Fakhri Ku Qalday Katrina Kaif
HMN:- Sanadkaan waxaa bilwaday in atariishooyinka bollywood-ka lisku qaldo waxaana hori u aragnay Priyanka Chopra oo lagu qalday Deepika Padukone sheekada ayaa halkeeda kasii socon doonto.
Maadaama atariishada Nargis Fakhri lagu qalday Katrina Kaif sheekadaan waxaa baraha bulshada soo dhigay isla Nargis Fakhri oo sheegtay in wiil uu ku qalday Katrina Kaif.
Sida Nargis ayaa sheegtay sheekada ayaa ka bilawday ” wiil ayaa ii yeeray wuxuuna i yiri Hi Katrina sawir sawiro makaa qaadan kara waxaana ku yiri mahadsanad laakiin aniga ma ihi Katrina.
Ka dib wuxuu i dhahay ” dhib malaha si walbo ay ahaataba sawir waanka qaadanaaya maxaa yeelay aad ayaa ugu ektahay.
Ka dib Nargis ayaa qoraal kale soo qortay iyadoo sheegtay ” in dadka yaab ay leeyihiin sababtoo sawir ayay ka qaadanaayan adigana aqoon uma lihid xitaa hadii aad dhahdo maya wey samaynaayaan waa layaab.
Nargis ayaana mar kale qoraag kale soo dhigtay iyadoo amaanaysa Katrina Kaif ” waxayna sheegtay in Katrina iyo iyada lisku qaldi karo maadaama ay leeyihiin indho isku mid ah sidoo kale ay dheer yihiin si fudud qof iskula qaldi karo labadood iyadoo hadalka kusoo gaba gabaysay ma jiro wax ka wanaagsan in qof qurux badan laguugu qaldo.
Dhinaca shaqada Nargis filimkeeda ugu danbeeyay wuxuu ahaa Banjo Halka Katrina Kaif uu u diyaarsan yahay filimka Jagga Jasoos oo la daawan doono 14 July 2017